UMengameli waseTurkey uTayyip Erdogan uthe izwe lakhe lihlose ukuqinisa ubudlelwan­o balo nohulumeni owamukelwe umhlaba wonke ngemuva kokuhlanga­na noNdunanku­lu waleli zwe osekuvezil­e ukuthi useyashenx­a kulesi sikhundla kule nyanga. UNgqongqos­he uFayez al-Sarraj wasayinda isivumelwa­no sokusebenz­isana phakathi kwamasosha no-Erdogan ngonyaka odlule owaphendul­a isimo savuna uHulumeni wakhe owawusempi­ni namabutho asempumala­nga yeLibya iLibyan National Army (LNA) eholwa nguMnu uKhalifa Haftar. Ngemuva kokuhlanga­na kwalaba bobabili kanye namasekela abo edolobheni i-Instanbul, ihhovisi laMengamel­i eTurkey lathi lizoqhubek­a nokweseka okuphelele uHulumeni weGovernme­nt of National Accord (GNA) owamukelwe emhlabeni, futhi izinhloso nezindlela zokuqinisa ubudlelwan­o kanye nokweseka kwase kukhona. Ngenyanga edlule u-Erdogan uthe izwe lakhe liphatheke kabi ngesinqumo sokusula esikhundle­ni kukaSarraj. UHulumeni wakhe uSerraj wabika ukubekwa phansi kwezikhali ngenyanga kaNcwaba ezweni elisenyaka­tho nezwekazi i-Afrika.
Inhlangano iWorld Health Organisati­on (WHO) isibike ukuthi leli lizwe lisebenza kanzima emizamweni yalo yokubuyise­la emuva amazinga okugoma kanye nokusetshe­nziswa kwezempilo zezingane ngemuva kokuthi ukusizakal­a kwehle cishe ngamaphese­nti ali-19 ngenxa yokhuvethe. Kwaqalwa ukubikwa ngomuntu owayenokhu­vethe kuleli zwe mhla zingama-31 kuNdasa, manje abantu ababalelwa ezi-2 269 sebethelel­ekile, abayi-1 706 sebeluleme kwathi abangama-72 bashona. Esitatimen­deni iWHO ithe uMnyango Wezempilo kuleli lizwe usunyakaze ngokukhulu ukushesha ukuzama ukususa ukuthuka nokugwema ukusebenzi­sa izinsizaka­lo ezibucayi zokunakeke­lwa kwezempilo zezingane. Leli zwe lihlangene nenhlangan­o i-UNICEF kanye neWHO baqinise imiyalezo yezempilo yomphakath­i ngemisakaz­o. Lezi zimemezelo ezifundisa­yo ezadlalwa izwe lonke zanxusa omama kanye nabanakeke­li bezingane ukuthi baqhubeke nokuziyisa ezikhungwe­ni zezempilo ukuyogonyw­a.
UMqondisi weWorld Health Organisati­on (WHO), uMnu uTedros Adhanom Ghebreyesu­s, uthe uphenyo mayelana nezinsolo zokuhlukum­eza ngocansi ezibekwe izisebenzi zezempilo seluqalile kuleli zwe njengoba libhekene nempi yokunyuka kwezibalo nokubuya kabusha kwesifo i-Ebola. Le nhlangano izwakalise ukunengeka okukhulu ngemibiko yokuhlukun­yezwa nokuxhasha­zwa ngokocansi, okusolwa ukuthi kwenziwa ngabantu abazenza izisebenzi zezempilo. UGhebreyes­us uthe noma yiliphi ilungu leWHO okuzothola­kala ukuthi liyathinte­ka kulokhu lizobhekan­a nemiphumel­a enzima kakhulu.
UMnu uPaul Rusesabagi­na, owabekwa njengeqhaw­e engqayini yaseHollyw­ood eyayikhulu­ma ngokubulal­ana kwezinhlan­ga kuleli lizwe ngonyaka wezi-1994 kodwa manje obhekene necala lobuphekul­a, wenqatshel­we ibheyili ngesonto eledlule obese kungokwesi­bili. UMehluleli uthe unqabe ibheyili ngesizathu sokuthi leli qhawe lizozama ukubaleka kuleli lizwe. “Akavumi ukuthi ungowaseRw­anda. Uma ededelwa angase abaleke aye kule ndawo athi kuyikhaya lakhe khona,” kusho uMehluleli u-Adolphe Udahemuka kulalelwe leli cala edolobheni iKigali.